နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း တရားဝင်စတင် - Xinhua News Agency
အက်ခ်လန်၊ နယူးဇီလန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
နယူးဇီလန်နိုင်ငံ အက်ခ်လန်မြို့ရှိ ကွာရန်တင်းအဆောက်အအုံတွင် နယ်စပ်အလုပ်သမားများကို ပထမဆုံးအကြိမ် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးပြီးနောက် နိုင်ငံတစ်ဝန်း COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း အစီအစဉ်ကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်၌ စတင်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နယူးဇီလန်နိုင်ငံသည် နယ်စပ်အလုပ်သမားများအတွက် ပထမဆုံး ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုများနှင့်အတူ ကပ်ရောဂါတုံ့ပြန်ရေး၌ အဓိကနေရာသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Ashley Bloomfield က ပြောခဲ့သည်။
“ဒီကနေ့ နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာရှိသူ တစ်ဦးတစ်ယောက်စီတိုင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့် အရေးကြီးဆုံးခြေလှမ်း တစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့ နယ်စပ်အလုပ်သမားတွေကို ပထမဆုံး ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သမိုင်းမှာ အကြီးမားဆုံး ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းအစီအစဉ်ကို စတင်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်” ဟု အက်ခ်လန်မြို့တွင် ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ Bloomfield က ပြောကြားခဲ့သည်။
ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းကို ဝယ်လ်လင်တန်တွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်တွင်လည်းကောင်း၊ Christchurch မြို့တွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်တွင်လည်းကောင်း စတင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လာမည့်သီတင်းပတ်အတွင်း သတ်မှတ်ထားသော သီးသန့်နေရာများနှင့် ကွာရန်တင်းအဆောက်အအုံများရှိ နယ်စပ်အလုပ်သမားနှင့် အလုပ်သမား ၁၂,၀၀၀ ခန့်ကို ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း Bloomfield က ပြောခဲ့သည်။
နယ်စပ်အလုပ်သမားများ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးသောအခါ ၎င်းတို့၏ အိမ်ထောင်စုများနှင့် ထိတွေ့မှုရှိသူများကို ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အများပြည်သူ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒုတိယနှစ်ဝက်မှ စတင်သွားဖွယ်ရှိကြောင်း နယူးဇီလန် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးမဟာဗျူဟာအရ သိရသည်။
Pfizer/BioNTech COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ပထမအသုတ်မှာ နယူးဇီလန်နိုင်ငံသို့ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း မပြုလုပ်မီ ရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ်က ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အက်ခ်လန်မြို့တွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးသူ ၂၅ ဦးအား ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ရက်က ပထမအကြိမ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပြည်သူများအနေဖြင့် သတိရှိစွာ အခြေခံတစ်ကိုယ်ရေကျန်းမာရေး အလေ့အကျင့်များကို တင်းကြပ်စွာ လိုက်နာရန် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သော အက်ခ်လန်တွင် COVID-19 သတိပေးအဆင့် ၂ အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး ကျန်နေရာများတွင်မူ အဆင့် ၁ အဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-02-20 13:49:33|Editor: huaxia
New Zealand’s largest city Auckland is currently at COVID-19 Alert Level Two and the rest of the country at COVID-19 Alert Level One. Enditem
Medical workers take part in training for treating COVID-19 patients atacomprehensive hospital in Auckland, New Zealand, April 3, 2020. (New Zealand Ministry of Health/Handout via Xinhua)
ဗီဇပြောင်း COVID-19 ရောဂါပိုးကြောင့် နိုင်ငံအတွင်း ကပ်ရောဂါအခြေအနေ ထပ်မံဆိုးရွား လာစေနိုင်ကြောင်း ကနေဒါနိုင်ငံသတိပေး
ထိုင်းနိုင်ငံ ချွန်ဘူရီပြည်နယ်ရှိ The Man That Rescues Dogs ဘေးမဲ့ဂေဟာ တွင် ခွေးအကောင်ရေ ၆၀၀ ကို စောင့်ရှောက်ထား